ARCHIVE, INVESTIGATION, POWER NEWS » साउन लागेपछि काठमाडौँमा म:म र रक्सीको व्यापार घट्यो, कस्मेटिक व्यापारी भने 'मालामाल' !
काठमाडौँ - साउन लागेपछि धेरैले एक महिनाकै लागि भएपनि रक्सी, र मासु छोड्ने गरेका छन् । यसो त साउनभर घरायसी जमघटपनि खास हुँदैन । भएनैपनि महिलाकेन्द्रित जमघट बढी हुने र साउनमा सकेसम्म रक्सी र मासुको प्रयोग नगर्नेहरु काठमाडौँमा छन् । यसको सीधा प्रभाव काठमाडौँका रक्सी, र मासु पसलमा परेको छ । साउन लाग्ने बितिकै रक्सी र मासुको व्यापार ह्वात्तै घटेको छ ।
'असार ३१ गते खुब बिक्यो मासु । क्लोजिङको समय भएकाले अधिकांस कार्यालय र घरमा पार्टी भएकाले मासुको विक्री बढ्यो । तर साउनको पहिलो दिन घटेको मासुको व्यापार दोश्रो दिन त साउने सोमबारले छोप्यो । प्राय: साउन, एकादशी, तीज, लगायतका चाडपर्वमा यसरी मासुको व्यापार घट्छ । साउनमा चाहिं पूरै महिनानै व्यापार खास नहुने हुनाले व्यापार घट्छ ।' काठमाडौँ न्यूरोडस्थित मासु व्यापारी सुमन श्रेष्ठले अर्थ सरोकार डटकमसँग भने । उनका अनुसार पहिलाभन्दा बिगतकेहि वर्षदेखि साउनमा मासु छोड्ने चलन बढेकाले यसरी व्यापार घटेको हो ।
म:मको व्यपार पनि घट्यो !
काठमाडौँमा दैनिक डेढ करोडभन्दा बढीको विक्री हुने म:मको व्यापारपनि साउन लागेसँगै स्वात्तै घटेको छ । काठमाडौँमा अचाक्ली भीड हुने बफ मम सेन्टरमा साउन लागेदेखि नै त्यो भीड देखिंदैन । काठमाडौँका सानदार मम, एभेरेष्ट मम, न्यूरोड मम लगायत चर्चित मम सेन्टरहरुमापनि साउन लागेसँगै ग्राहकको संख्या घटेको व्यापारीहरुको भनाइ छ । 'साउनमा विशेषगरी बफ ममको व्यापार घट्नु सामान्य नै हो । यसपाली पनि घटेको छ ।' अर्थ सरोकार डटकमसँग कुराकानी गर्दै न्यूरोड ममका संचालक सुदीप कक्षपतिले भने । उनका अनुसार काठमाडौँमा रहेका कतिपय बाफ ममका पारखीहरुले समेत साउनमा बफ म:म नखाने गरिदिनाले ममको व्यापार घटेको हो । उनका अनुसार काठमाडौँमा साउनको मौकामा भेज ममको व्यापार बढ्ने अनुमान भएपनि त्यसो पनि नभएको स्पष्ट पारेका छन् ।
रक्सीको व्यापार पनि घट्यो, साउनको सोमबार त झन् टीठलाग्दो व्यापार !
साउनले छोपेसँगै रक्सीको व्यापार पनि घटेको छ । त्यसमा पनि महिलाले खाने वाइनको व्यापार त झनै घटेको छ । काठमाडौँमा रहेका मदिरा व्यापारीका अनुसार साउन लागेसँगै बीयर, अन्य रक्सी, वाइन लगायतको व्यापार घटेको छ । 'रक्सीको व्यापार घटेको छ । तर साउन भरीनै भने व्यापार घट्दैन । साउनको सोमबारचाहिं व्यापार ठ्याक्कै कम हुने पक्का हो । अझ यसपाली साउन महिनामा ५ वटा सोमबार परेकाले व्यापारमा केहि असर पक्कै गर्छ ।' कोटेश्वरका मदिरा व्यपारी स्मृति सिग्देलले अर्थ सरोकार डटकमसँग भनिन् ।
कस्मेटिक व्यापारीहरु मालामाल !
यता साउन लागेदेखिनै कस्मेटिक व्यापारीहरु भने मालामाल भएका छन् । काठमाडौँमा रहेका अधिकांस कस्मेटिक पसलमा व्यापारीहरुको व्यस्तता चर्को छ भने ग्राहकको संख्या पनि ह्वात्तै बढेको छ । 'साउनमा बढीजसो चुरा, पोते, टिका, कस्मेटिकका अन्य सामानहरुको व्यापार बढ्ने गरेको छ । यसपाली पनि व्यापार निकै बढेको छ । मेहेन्दीको व्यापार अरुबेला भन्दा बढी यसपाली छ । समग्रमा व्यापार साउनमा निकै राम्रो छ ।' कोटेश्वरमा कस्मेटिक व्यापार संचालन गर्ने सुमित्रा सत्यालले अर्थसरोकार डटकमसँग भनिन् ।